उम्मेदवार भोट माग्न धानखेतमै
पोखरा, २५ कात्तिक । नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष सोमनाथ अधिकारी प्यासीले जनताको चाहान र देशको माग नै वाम गठबन्धन भएको बताएका छन्। कास्की क्षेत्र नं १ को क अन्तर्गत पोखरा २७ को डाँडामा स्थापन गरिएको वाम गठबन्धनको चुनाव प्रचार प्रसार सर्म्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रको माग र जनताको चाहनाअनुसार भएको वाम गठबन्धनले आगामी दिनमा दिगो… पुरा पढौ
‘स्थायी शान्तिको लागि वाम एकता’
पोखरा, २५ कात्तिक । वाम गठबन्धनअन्तर्गत कास्की क्षेत्र क्षेत्र ३ को प्रदेशसभा -ख) को निर्वाचन परिचालन कमिटीको कार्यलय उद्घाटन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार जगत विश्वकर्माले कार्यालय उद्घाटन गर्दै स्थायी शान्ति र समृद्धिको लागि वाम गठबन्धन भएको बताए।उनले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार जितेमात्र स्थायी शान्ति र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने बताए। कानुनी अड्चनले एउटै निर्वाचन चिहृन लिएर चुनावमा… पुरा पढौ
दाहालले चुनाव जित्लान् ?
चितवन, २३ कात्तिक। नेपाली राजनीतिमा सधैं चर्चामा रहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनको क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचन लड्दै गर्दा उनको चुनावी क्षेत्र पनि चर्चामा छ। पहिलो पटक गृहजिल्लाबाट निर्वाचन लड्दै गरेका दाहाललाई निर्वाचन जित्न जति चुनौती छन् त्यति नै उनलाई अवसर पनि रहेका छन्। चितवन क्षेत्र नं. ३ मा तत्कालीन समयमा गुडिरहेको बसमा एम्बुस पड्काएर भएको बाँदरमुढे घटना,… पुरा पढौ
वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभा
काठमाडौं, २३ कात्तिक । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धनको चुनाव प्रचारका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्तरुपमा देशका विभिन्न शहरमा चुनावी सभामा सहभागी हुने भएका छन् । देशका १४ वटा शहरहरुमा वाम गठबन्धनद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई दुर्इ नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ । दुवै… पुरा पढौ
‘लेनदेन निर्वाचनको चुनौती’
काठमाडौं, २३ कात्तिक । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले मतदाताबीचमा देखापरेको अदृष्य आर्थिक लेनदेनको विकृति आगामी निर्वाचनका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन् । डा यादवले मतदातालाई रिझाउन गरिने आर्थिक चलखेलले निर्वाचन स्वच्छ हुन नसक्नेमात्र नभइ लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य नै धरापमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी तथा आचारसंहिता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मुख्यसचिव र सचिवहरुसँग गरेको छलफलमा… पुरा पढौ
वाम गठबन्धनको चुनावी प्रचार तीव्र
पोखरा, २३ कात्तिक। आगामी मंसिर २१ मा हुने निर्वाचनका लागि कास्कीका वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनावी प्रचार तीव्र पारेका छन् । उनीहरु घरदैलो, चुनावी सभा गर्दै आफ्नो पक्षमा भोट माग्न व्यस्त छन् । कास्की १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगराज अधिकारी र प्रदेशसभा तर्फ ख का उम्मेदवार मनबहादुर गुरुङले घरदैलोलाई तीब्र बनाएका हुन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तासहित उनीहरुले… पुरा पढौ
नयाँ शक्तिको चुनावी अभियान
पोखरा, २३ कात्तिक। नयाँ शक्ति पार्टीनेपाल चुनावी प्रचार अभियानअन्तर्गत कास्कीका सबै क्षेत्रका मतदाताको घरदैलोमा पुग्न शुरु गरेको छ। पार्टीका कास्की संयोजक हेमबहादुर थापाले आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक दल बन्ने लक्ष्यससहित चुनावी अभियान थालिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार शम्भु खातीको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति बनिसकेको छ भने २५ गतेबाट औपचारिक घरदैलो कार्यक्रम शुरु हुने नयाँ शक्ति कास्कीले बताएको… पुरा पढौ
कास्कीको चुनाव : विगतदेखि वर्तमान
आगामी मंसिर २१ गते हुने दोश्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि कास्कीमा सबै पार्टीका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरु यतिबेला चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् भने मतदातामा चुनावी नतिजाबारे आँकलन शुरु भएको छ। प्रचार र उम्मेदवारको व्यक्तित्व हेरेर पनि सर्वसाधारणले जितहारको अनुमान लगाइरहेका छन्। जिल्लाभर नौ पदका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ९५ जना… पुरा पढौ
बहुमत आउने काँग्रेसको दावी
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन् । समितिले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता खाँणले यस्तो दावी गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये कम्तीमा ५५ प्रतिशत सीट जित्ने भन्दै सहजै बहुमत आउने बताए । नेता खाँणले ६०… पुरा पढौ
कास्कीका तीनै क्षेत्रमा काँग्रेसको चुनावी माहौल तात्यो
पोखरा, २२ कात्तिक। आगामी २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि कास्कीबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार जिताउन काँग्रेस कास्कीले प्रचार तीव्रता पारेको छ। उम्मेदवारका लागि 'सेड्युल’ नै बनाएर चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र पारिएको हो । 'काँग्रेसका नौ जना प्रत्यक्ष सहित समानुपातिक उम्मेदवारलाई समेत हामीले सेड्युल उपलब्ध गराइसकेका छौँ’-काँग्रेस कास्कीका कार्यवाहक सभापति सुदीपमोहन भट्टराईले भने-'एकदमै व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरुको घरदैलो र… पुरा पढौ